अध्यात्म शास्त्र अनुसार अनि आधुनिक विज्ञानको लागि अज्ञात, हाम्रो जीवनमा ५०% समस्या केवल आध्यात्मिक कारणले नै हुन्छ अनि अन्य ३०% समस्या आध्यात्मिक एवं मानसिक अनि / अथवा शारीरिक कारणले हुन्छ ।
सन्दर्भ लेख : ‘ जीवनको समस्याहरुका मूलभूत आध्यात्मिक कारणहरुका वर्गीकरण । ‘
हाम्रो जीवनका समस्याहरुका मूलभूत आध्यात्मिक कारणहरुमा एक हो, मृत पूर्वजका अतृप्तिका कारण वंशजलार्इ कष्ट हुनु (पितृदोष) । सम्पूर्ण मानवजातिलार्इ कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित गर्ने अनेक आध्यात्मिक कारणहरु मध्य यो एक सामान्य कारण हो । पूर्वजको कारण वंशमा कुनै प्रकारका कष्ट किन हुन्छ, यसको विस्तृत स्पष्टीकरण दिनु पहिला, आउनुहोस् जानौं कि पितृदोषको कारण कुन प्रकारका कष्ट हुन्छन् ।
पितृदोषको कारण हाम्रो; सांसारिक जीवनमा तथा आध्यात्मिक साधनामा बाधा उत्पन्न हुन्छ । केहि प्रसङ्गमा यस्तो देखाई दिन्छ कि मानौ सम्पूर्ण परिवारमा कालो छाया छाएकोछ । यसलार्इ अनेक प्रकारका उपाय गर्दा पिन परिवारको धेरै सदस्यहरु विविध प्रकारका समस्याहरुका सामना गर्नु पर्छन् । दैनिक जीवनमा पितृदोषको विविध लक्षणहरु दिखाई दिन्छन् ।
वैवाहिक जीवनमा अशान्ति
दुर्व्यसन (addiction) (लगभग ७०% दुर्व्यसन पितृदोषको कारण हुन्छ)
परिपूर्ण रुपले तयारि गरे पनि परीक्षा केही याद नआउनु
नोकारीबाट निकाल दिनु
मानसिक चुनौती भएका बच्चा अथवा विशिष्ट समस्याले ग्रस्त बच्च हुनु
बच्चाको अकाल मृत्यु हुनु
गर्भपात, बाल्यकालमा मृत्यु इत्यादि तब हुन्छ जब पितृदोषको साथ प्रारब्धमा अकाल मृत्यु जस्ता अन्य केही तीव्र आध्यात्मिक समस्या हुन्छन् । यस्तो तीव्र समस्या केवल पितृदोषको कारणले मात्र हुन सक्दैन । तर यो समस्या बौद्धिक दृष्टिले पितृदोषको महत्वपूर्ण सङ्केत मान सक्छौं; तथापि केवल कोही सन्त अथवा गुरु (आध्यात्मिक दृष्टिले उन्नत मार्गदर्शक) नै निश्चित रूपमा समस्याको मूलभूत कारण बताउन सक्छ ।
बौद्धिक स्तरमा, हामी दुर्इ सामान्य नियम उपयोग गरेर यो निश्चित गर्न सक्छौं कि समस्याको कारण आध्यात्मिक हो अथवा होर्इन :
• समस्या सामाधान गर्न सबै उपाय विफल भएका छन् । विशेष गरेर ती समस्याहरु जुन आधुनिक विज्ञान द्वारा सजिलैसँग ठीक हुन सक्छ उदा. छालामा दाना आउने, छातीमा वेदना हुनु आदि ।
• परिवारको अनेक सदस्य एक-साथ (उदा. ५ मा ४ जनालार्इ) माथी उल्लेख गरेका समस्याहरु मध्ये केही न केही समस्याले ग्रस्त हुनु । (परिवारको सबै सदस्य ग्रस्त हुनुको कारण हो, सबैको पूर्वज एउटै हुनु । )